Efa hatry ny alahady teo no notanan’ny Bianco ny ben’ny tanàna Tsabo Pierre raha toa ka tsy namaly ny fampiantsoana azy i Claudine Razaimamonjy tompon’ny hotely A & C. Vola manodidina ny 260 tapitrisa ariary no voalaza fa natokana tamin’ny fananganana biraon’ny kaominina ka i Claudine Razaimamonjy no nahazo ny tsena, saingy tsy arakaraka izay ny asa vita. Nandeha be ny resaka fa hosamborina hatao fanadihadiana Ramatoa Claudine rehefa tsy mamaly ny fiantsoana azy. Omaly tolakandro anefa dia mbola tazana teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha ity mpandraharaha izay akaiky dia akaiky ny filoham-pirenena ity, tsy fantatra na nila vonjy na nandamin-dresaka na niafina tsotra izao mba tsy hiharan’ny fisamborana na sarika am-pandriana tampoka. Fantatra koa izao fa misy tale tao amin’ny minisiteran’ny atitany sy mpandraharaha hafa voasaringotra amin’ity raharaha ity. Hatolotra ny fampanoavana anio alarobia ny raharaha. Mbola misy anefa ny fanadihadiana tsy vita. Tena hivoaka ve ny marina ka ho fantatra izay tena atidohan’ilay fanodinkodinam-bola sa sanatria ireo irakiraka no hadoboka am-ponja fa afaka hatrany ireo tena tompon’ny afera maizina ?